Technology Archives - Page3of4- Shop
Shop > All Articles > Technology
မေးခွန်းတွေဖြေပြီး မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းဂိမ်းတွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်0688
The KaungHtet April 24, 2020 8:32 am January 14, 2022
🔔Tiktok , Instagram နဲ့ Facebook မှာအလန်းစား ဗွီဒီယိုတွေရိုက်ကူးနိုင်မည့် Tripodများ🔔0512
The KaungHtet April 24, 2020 4:19 am April 24, 2020
Tiktok , Instagramနဲ့ Facebookတွေမှာ အလန်းစားဗွီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အတွက် Tripod လေးတစ်ခု လောက်တော့ဝယ်ထားသင့်တယ်။ တစ်ယောက်ထဲခရီးသွားရင်လဲ Tripod လေးတွေနဲ့ထောင်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ဗွီဒီယိုတွေရိုက်လို့ရတယ်နော်။ ဒါ့ပြင် ခရီးသွား Vlog(Blog) တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ Mini Tripodလေးတွေနဲ့ …
”လက်ပ်တော့အကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိလဲ ဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးစမ်းကြည့်ရအောင်”0237
The KaungHtet April 22, 2020 9:01 am April 22, 2020
📢 အတန်ဆုံးလျှော့စျေးတွေနဲ့ Home Appliance and TV Sales📢0197
The KaungHtet April 22, 2020 6:39 am April 22, 2020
Home Appliance and TV sale မှာတော့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ TV တွေကို အများဆုံး ၆၅% အထိလျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလျှော့စျေးမှာတော့ ကလေးတွေအတွက်အစားအစာ ပြုလုပ်တဲ့စက်တွေကိုပါ ရောင်းချပေးမှာပါ ။အထက်တွင် ဖော်ပြထားတာကတော့ Midea …
သင်ဟာ ဖုန်းအကြောင်း သေချာနားလည်တဲ့သူလားဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြည့်ပါဦး။0734
The KaungHtet April 8, 2020 9:56 am April 8, 2020
လူအများစုဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းမပါဘဲမနေနိုင်ဘူးလို့ခံစားရပေမယ့် လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဟာတကယ်တမ်းကာလရှည်ကြာစွာတည်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်ကမှပေါ်လာခဲ့တာပါ။ မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ပြီး သင်ဘယ်လောက်ဖုန်းအကြောင်းသိလဲ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။
Aircon နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ0294
The KaungHtet April 1, 2020 10:44 am May 13, 2020
အခုလို ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီရောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် Aircon သုံးစွဲမှုလည်း ပိုပြီး များပြားလာပါတယ်။ အခု အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ ကာလမှာ မလိုအပ်ပဲ Aircon ပျက်တာမျိုးနဲ့ မကြုံရရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ Aircon တစ်ခု ရေရှည်အသုံးခံဖို့ဆို ဘာတွေလုပ်ဖို့ …
ကျောင်းသား/သူတွေအတွက် သင့်တော်သော ၆သိန်းအောက်လက်ပ်တော့များ0602
The KaungHtet March 11, 2020 9:13 am March 11, 2020
ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ သင်တန်းတွေတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဂိမ်းကစားဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဘယ်လက်ပ်တော့ ဝယ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသား/သူ တွေအတွက် မင်မင်က သင့်တော်တဲ့ ၆သိန်းအောက် လက်ပ်တော့လေးတွေ ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Lenovo ThinkPad X1 Carbon …
အိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔03083
The KaungHtet February 20, 2020 4:47 am February 20, 2020
Printer တစ်လုံးလိုအပ်နေတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ … ထားဖို့နေရာလည်း အများကြီးမပေးချင်ဘူး၊ ပိုက်ဆံလည်းအများကြီး မသုံးချင်ဘူး ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Printer လေးတစ်လုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ 💁🏻 ဒီ Printer လေးကတော့ … HP LaserJet Pro …
၃ သိန်းကျပ်အောက် Samsung တံဆိပ်ဖုန်းများ02964
The KaungHtet January 29, 2020 9:49 am January 30, 2020
ယနေ့ခေတ်မှာ ဖုန်းသုံးစွဲသူများလာတာနှင့်အမျှ ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်မျိုးစုံလည်း အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်ဖန်တီးနေကြပါတယ် … 📱 အရင်ကတည်းက နာမည်ရှိသည့်တိုင် ယနေ့ထိ Brand တစ်ခုကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုကို ညွှန်းပါဆိုရင်တော့ Samsung ကိုပဲ ဖော်ညွှန်းပါရစေနော် ….😍 ဘတ်ဂျက်လည်းဖြစ်ရမယ် …
ပန်းသီးလေးကိုမှ ချစ်တဲ့ ကိုကိုမမတွေအတွက် Apple အမှတ်တံဆိပ် iPhone series မျိုးစုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…0759
The KaungHtet January 28, 2020 4:10 am January 28, 2020
ဖော်ပြထားတဲ့ iPhone တွေကတော့ Shop ရဲ့ Official Store တစ်ခုဖြစ်တဲ့ mDrive မှနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ စျေးနှုန်းများဖြစ်ပြီး mDrive သည် Apple တံဆိပ်ရဲ့ Authorized Reseller တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ mDrive …
101 Dog Care Tips: For Beginners
Emily on 2022 Fashion Trends and Tips – ၂၀၂၂ တွင်ခေတ်စားလာမယ့် ဖက်ရှင်များ
Suzann Aukes on Well, Well, Well. How should we recover our skin and hair from Post-Thingyan?
Stacey Sahli on Well, Well, Well. How should we recover our skin and hair from Post-Thingyan?
❄Air con ကို မီတာခ အရမ်းမကုန်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?❄ 4322
သင့်ရဲ့ ဝါသနာကို အခုပဲရှာဖွေလိုက်ကြရအောင်…. 3224
အိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔 3083
၃ သိန်းကျပ်အောက် Samsung တံဆိပ်ဖုန်းများ 2964
သင်ဟာ မိတ်ကပ်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါဦး? 2661